BROAD GROUP dia mpanamboatra sy mpanondrana lehibe indrindra any Shina hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 1998. Ny vokatra lehibe indrindra amin'ny volon'ondry Glass, volon'ondry vato, Foam Rubber Plastic Insulation ary Aluminum foil miatrika dia ampiasaina betsaka amin'ny fanorenana, thermoelectricity, indostrian'ny solika, fandrendrehana. indostria, indostrian'ny fandefasana entana, indostrian'ny habakabaka, fanamafisam-peo, indostrian'ny vata fampangatsiahana sns. Ny vokatra sy ny serivisinay dia novolavolaina mba hampahazo aina kokoa ny fiainan'ny olona sy hahazo tombony bebe kokoa amin'ny fitsitsiana angovo. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia tiantsika ny hamorona lanja amin'ny alàlan'ny fanavaozana, ny fitomboana ary ny andraikitra ara-tsosialy.
"High Quality, Price Competitive, Service Continue" no toro-làlanay, Mifidy anay ho mpamatsy fitaovana insulation, hahazo fitaovana sy serivisy kalitao ianao, inona no zava-dehibe kokoa, ny vidin'ny fifaninanana azonao dia hamonjy anao betsaka amin'ny tetikasanao, tianay hiara-hiasa aminao miaraka ary mampanantena izahay fa tsy hijanona na oviana na oviana ny fanompoana raha tsy mahazo fahafaham-po.
Tongasoa eto ianao mitsidika anay amin'ny fotoana rehetra ary miresaka raharaham-barotra aminay mifanatrika. Manantena izahay fa hanorina fifandraisana ara-barotra maharitra amin'ny orinasa hajainao!
Ankehitriny, efa manana orinasa maharitra sy maharitra miaraka amin'ny mpanjifa any Chili, Brezila, Malezia, Indonezia, Singapore, Filipina ary Vietnam, Russia, Ukraine, Polonina, Koety, Arabia Saodita, Bangladesh, India, Pakistan, Emirà Arabo Mitambatra, anisan'izany ny firenena 80 mahery.
Miorina ao amin'ny Group Manufacturing sy ny Group Sales izahay. Ny Vondrona Manufacturing dia ahitana zavamaniry fito any Shina tsirairay avy manao karazana insulation materialBroad group dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana fonosana namboarina mba hamenoana ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny hafanana sy ny fanamafisam-peo, ny fonosana Standard dia matetika misy amin'ny fandefasana haingana. Azonao atao ny mahita ny vokatray any Shina an-trano, Aostralia, Brunei, Arabia Saodita, Bangladesh, Ejipta, Vietnam, ary Rosia sns mihoatra ny 50 any ampitan-dranomasina.
Tohanan'ny fanohanana renivola mafy sy tanjaka ara-teknika avy amin'ny vondrona Broad, manana foibe R&D sy atrikasa any amin'ny faritanin'i Hebei tanànan'i Langfang izahay. Taorian'ny taona maro 'fampandrosoana, ankehitriny dia manana 8 mamokatra andalana ho an'ny Glass volon'ondry insulation sy 3 mamokatra andalana ho an'ny Rock volon'ondry insulation, ny vokatra dia nandalo CE, ISO, A1, SGS sy AS / NZ taratasy fanamarinana, ny kalitao vokatra sy ny fanompoana OEM natolotra. fa ny ISOVER, HANSO, ISOERM ary IZOCAM dia nahazo laza sy fankasitrahana iraisam-pirenena bebe kokoa.